२६ वर्षपछि पनि ‘उजेली’ किन हिट? | Nijgadh.com | ताजा खबर
Home समाचार २६ वर्षपछि पनि ‘उजेली’ किन हिट?
२०७५, २७ चैत्र बुधबार १५:२६
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘उजेली’ टेलिफिल्म ‘हट केक’ भइरहेको छ। नेपाल टेलिभिजनबाट २६ वर्षअघि प्रसारण भएको टेलिफिल्मले अहिले आएर एकाएक चर्चा कमाउनु आश्चर्यजनक हो। नेपालमा अहिलेसम्म थुप्रै टेलिफिल्म बनेका छन्। सबै गुमनाम छन्। तर, ‘उजेली’ दियो बनेर धपक्क बलेको छ। अन्नपूर्ण सम्पूर्णका लागि दीपेन्द्र लामाले २६ वर्षपछि पनि ‘उजेली’ किन हिट? शीर्षाकको विचार तयार पारेका छन् ।
उजेलीलाई माया गर्ने पात्र हुन्छिन्, उनकी जेठानी पार्वती। तर, कलिली उमेरकी पार्वती बच्चा जन्माउन नसकेर ज्यान गुमाउन पुग्छिन्। यो दृश्यलाई समेत धेरै रोनाधोनावाला बनाइएको छैन। ‘उजेली’ले मेलोड्रामा र ‘लाउड एक्टिङ’ बिना पनि दर्शकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ।आईएनजीओको लगानीमा बनेको फिल्म भन्नासाथ नाक खुम्चाउनुपर्ने अवस्था थियो र अभैm छ। किनभने, त्यसमा नारा र भाषणबाजी बढी थोपरिएको हुन्छ। दर्शकलाई सीधै पाठ पढाउने प्रयास हुन्छ। ‘उजेली’ पनि युनिसेफ नामक आईएनजीओको लगानीमा तयार भएको हो। तर, यसले दर्शकलाई भाषणबाजी नगरीकनै आफ्नो सन्देश बुझाउन सकेको छ। र, २६ वर्षपछि पनि दर्शकलाई यसले तानिरहेको छ।
Previous articleचितवनबाट सुरु भएको थियो बाराको विनाशकारी हुरी, टोर्नाडो नै भएको पुष्टि
Next articleनिजगढ गोल्डकपको उपाधिका लागी बिरगंज युनाईटेड फुटबल क्लव र आयोजक निजगढ युवा क्लव भिड्ने
स्थानिय समाचार Nijgadh.com - २०७५, २७ चैत्र बुधबार १५:२६ 0
प्रदेश-२ Nijgadh.com - २०७५, २७ चैत्र बुधबार १५:२६ 0
समाचार Nijgadh.com - २०७५, २७ चैत्र बुधबार १५:२६ 0